अजित हत्या प्रकरण : प्रहरीमाथि नै शंका « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » अजित हत्या प्रकरण : प्रहरीमाथि नै शंका
अजित हत्या प्रकरण : प्रहरीमाथि नै शंका
२०७३ साउन ११,जागरण मिडिया सेन्टर ।
अन्तरजातिय विवाहपछि रहस्यमय रुपमा मृत भेटिएका काभ्रेका अजित मिजारको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनमाथि आशंका बढेको छ । धादिङ प्रहरीले शव भेटिएपछि गरेको शंकास्पद कृयाकलापका कारण प्रहरी र प्रशासनमाथि नै आशंका बढेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
धादिङको गजुरीमा झुण्डिएको अवस्थामा शव भेटिएपछि प्रहरीले घर परिवार नआउँदै गाडेको, नक्कली पोष्टमार्टम रिपोर्ट बनाएको र छानविनमा तदारुकता नदिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रहरी प्रशासनमाथि नै शंका गरेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले परियारले शव भेटिएपछि प्रहरीले एक हप्ता सम्म राख्नुपर्ने, मृतकको हुलिया दिएर सुचना निकाल्नुपर्नेमा त्यस्तो केही प्रक्रिया पुरा नगरी सिधैँ शव गाडेका कारण प्रहरी नै शंकाको घेरामा रहेको बताए ।‘हामीले प्रहरीलाई शंका गर्ने धेरै आधार छन्, उसले शव भेटिएपछि कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी लास गाडेको छ’ परियारले भने ।
गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालय र महान्याधिवक्ता कार्यालको ध्यानाकर्षण
घटनाको स्पष्ट रुपमा सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले परियारले बताए । ‘त्यसैले घटनाको सत्यतथ्य छानविनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखेर जानकारी गराएका छौँ’ उनले भने ।
काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल –६, होक्सेका १८ वर्षीय अजित ढकाल मिजारले काभ्रेकै ५२ किलो निवासी कल्पना पराजुलीसँग २५ असारमा प्रेम विाह गरेका थिए । २७ गते घर पुगेलगत्तै धुलिखेल प्रहरीले उनीहरुलाई माइती पक्षको दवावमा जवरजस्ती छुटाएको थियो । छुटाएको दिनदेखि नै माइती पक्षले बारम्बार धम्की दिने र केटीसँग सम्पर्क भए मात्रै पनि धर्तीमा टेक्न नदिने धम्की दिँदै आएको उनको वावुले बताए । २९ असारमा दिउँसो घरबाट बाहिर निस्किएका अजितको शव धादिङको गजुरी इलाका प्रहरी कार्यालयले ३० गते विहान सुर्के खोला छेउमा मृत अवस्थामा भेटाएको थियो । सो शवलाई प्रहरीले वेवारिसे भन्दै स्थानीयको रोहवरमा गाडेको थियो । तर, मृतकका आफन्तले शवको पुन ः पोष्टमार्टम गर्न माग गरेका थिए । आफन्त र अधिकारकर्मीले पुनः पोष्टमार्टम गर्न दवाव दिएपछि भिसेरा परीक्षण गरिएको छ ।
११ दिन सम्म अनुगमन गरेन मानवअधिकार आयोगले
अजितको मृत्यु रहस्यमय तरिकाको भए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने अहिले सम्म स्थलगत अनुगमन गरेको छैन । घटना भएको करिव दुई हप्ता वितिसक्दा समेत मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन नगरेका कारण स्थानिय आक्रोशित भएका छन् । घटनाको बारेमा स्थलगत अनुगमनमा जाने कुरा भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी गिता श्रेष्ठले बताईन् । ‘अनुगमनमा जाने कुरा हुदैछ, फाइनल भएको छैन ’ श्रेष्ठले भनिन् ‘पोष्र्टमार्टम रिपोर्ट के आउँछ त्यसपछि बैठक बसेर अनुगमनमा जाने नजाने बारे टुङ्गो लाग्छ ।’
प्रतिवेदनबारे बुझ्दा धम्क्याउँछन सिडिओ
घटनाको बारेमा व्यापक दवाव सृजना भएपछि गृहमन्त्रालयले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि छानविन समिति गठन गरिसकेको छ । एकसाताको म्याद दिएको समितिको प्रतिवेदन वुुधवार आउने छ । तर घटनाको विवरणबारे जानकारी लिँदा पत्रकारलाई नै धम्क्याएको दियो पोष्टका पत्रकारले बताएका छन् । ‘हामीले छानविन प्रकरण के भैरहेको छ भनेर सोध्दा अहिले २ पैसामा विक्ने पत्रकारलाई जानकारी दिन मिल्दैन भने’ दियो पोष्टले लेखेको छ ।
छानविन समितिको प्रतिवेदन पछि थप जानकारी
छानविन समितिको प्रतिवेदन पछि मात्र घटनाको बारेमा पत्ता लाग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव खरेलले बताए । ‘त्यो घटनाको बारेमा यथार्थ बुझ्न छानविन समिति गठन गरेका छौँ, त्यसले प्रतिवेदन बुझाएको छैन, त्यस पछि मात्र अन्य काम अगाडी बढाउन सकिन्छ’ उनले भने । परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा जघन्य अपराधको घटनालाई ओझेलमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता दलित अधिकारकर्मीहरुमा छ ।
संसदीय समितिमा कुरा उठाउँछौँ : साँसद विश्वकर्मा
यस घटनाको विषयमा सत्यतथ्य रुपमा छानविन नभएमा आफुहरुले व्यवस्थापिका संसदमा कुरा उठाउने सांसद तथा अधिकारकर्मी कमला विश्वकर्माले बताईन् । सांसद विश्वकर्माले यस्तो अमानवीय कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुने भन्दै व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन हुना साथ संसदमा कुरा उठाउने बताईन् । कुनै पनि हिसावले घटना लुकाउन खोजिए र दोषीलाई उन्मुक्ति दिएमा त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने समेत जागरण मिडिया सेन्टरकी उपाध्यक्ष विश्वकर्माले बताईन् । उनले केही दिनमै व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल चलाउने बताईन् । ‘एउटा कुखुराको चल्ला, कुकुर मर्दा त कसको हो, के भयो र म¥र्यो भनेर सोधखोज गरिन्छ तर यहाँ मान्छे मर्दा समेत त्यसको कुनै सोधखोज गरिएको छैन’ उनले भनिन् ।
किटानी जाहेरी पछि पनि प्रहरीले पक्रेन आरोपीलाई
माइती पक्षले धम्की दिएको दोस्रो दिन अर्थात असार २९ मा रिचार्ज किन्न भन्दै १ सय रुपैँया घरबाट लिएर निस्कदै थिए । आफूसँग भएको १ सय रुपैंया मध्ये ५० रुपैंया आफ्नी बहिनीलाई दिए । दिउँसो घरबाट निस्केका अजित दुई दिनसम्म घरमा नआएपछि परिवारका सदस्यहरु अत्यासमा परे । तर, सामाजिक सञ्जालमा उनको तस्विर भाइरल भइसकेको थियो । धादिङको मलेखु बजार नजिकै रहेको फूर्के खोला किनारको प्रतिक्षालयमा उनको शव झुण्ड्याइएको अवस्थामा थियो । सोही तस्विर अनुसार परिवारका सदस्य इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी पुगे । तर, प्रहरीले वेवारिसे शव भन्दै नक्कली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाएर गाडिसकेको थियो । तर, प्रहरीले गरेको पोस्टमार्टम विश्वास नलागेको भन्दै आफन्तले लास खोतलेर पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालमा ल्याएका थिए । शिक्षण अस्पतालले पोस्टमार्टम गर्न अस्वीकार गरेपछि गृहमन्त्रालयको दवावमा पोस्टमार्टम गरिएको थियो । मृतकका आफन्तले मिजारको हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् तर अहिलेसम्म घटनाबारे कुनै प्रगति भएको छैन । ‘एउटा सामान्य घटनामा उजुरी गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर छानविन गर्छ तर यति जघन्य अपराधमा किटानी जाहेरी दिएपछि पनि पक्राउ गर्न मानेको छैन’ दलित महिला संघ काभ्रेका अध्यक्ष मैया रोकायाले भनिन् ।
प्रहरीले नै बनायो नक्कली पोस्टमार्टम रिपोर्ट
सामान्यतया शवको पोस्टमार्टम गर्दा शरिरको चिरफार गरिन्छ नै । तर, अजित मिजारको शवलाई प्रहरीले पोस्टमार्टम गर्दा भने लगाएको कपडा उतारेको छैन । ‘शुरुमा हामीलाई प्रहरीले पोस्टमार्टम गरेका छौं, नेपाल सरकार एउटै हो किन दोहो¥याएर पोस्टमार्टम गर्नुप¥यो भनेको थियो,’ मृतकका आफन्त केशव मिजारले भने, ‘हामीले लास निकालेर हेर्न खोज्दा पनि प्रहरीले धेरै गाडिएको छ किन निकाल्नु प¥यो भनेको थियो । तर, निकाल्न जाँदा धेरै गहिरो खाल्डो बनाइको रहेनछ । शव निकाल्दै गर्दा प्रहरी नै हरायो ।’
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, दलित समाचार, समाचार on July 26, 2016 .
← Previous Post	सेतीलाई दिशा खुवाउनेलाई कारबाही हुन्छ ? →